Murugo!! Ciyaaryahan Caan Ah Oo Dilay Gacalisadiisa Oo Uur U Leh Hilibkeedana eeyo Siiyey
Wednesday, December 12th, 2018 - 10:05:45
Wednesday April 26, 2017 - 09:28:33 in Wararka by Kubad Bile
Maahan wax nagu cusboonaan doona in xirfadda kubadda cagta aan ka dheehano falal aad u xun ama u qaraar, waxaana xasuus u leenahay oradyahakii reer south Africa e dilay saaxiibtii oo u dabaal dageysa maalinta jaceylkooda, laakiin markale ayey tani dhacday markii gool haye reer Brazil ah uu xaaskisii dilay.
Bruno Fernandez de Souza, kaasoo ku can ah magaca ‘Bruno’ waxa uu kamida yahay xiddigaha ugu sareeya dhanka goolka dalkaasi Brazil,kaasoo hadda u safta kooxda Flamengo ,waxaana laacibkaan lagu helay dambi kadib markii uu dilay gabadha lagu magacaabo Eliza Samudio, kadibna uu hilibkeeda intuu jar jaray siiyey eeyo guriga joogay.
Waxaa la rumeesan yahay in goolhaye Bruno oo la kulmay gabadha dharka xayeysiisa ee aadka u quruxda badan, waxaana ay ahaayeen saaxiibo waqti wada socda, iyadoo dhawaan shaacisay inay uur leedahay islamarkaana uu isaga u yeelay, waxaana uu u muuqdaa nin kasoo horjeestay uurka gabadhan sidaasna uu u gowracay Eliza.
Sida ay daabacday jariiradda kasoo baxda dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada Milan, waxa uu xiddigaan aad u raadinaayey inuu qariyo qaladka uu gabadhan ka galay taasoo xitaa ku kaliftay inuu diloisagoo aan jecleesan inay dhasho ilmaha ku yimid habeenkii wada seexashadooda.
Sikasta 22-jirkaan ayaa xabsiga la geeyey, inkastoo maxkamada sare ee dalkaasi Brazil fasaxday laacibkan, iyadoo hadda sugeysa cadeymo dheeraad ah, waxaana weli socda kiiskiisa waxaana laga yaabaa inuu ciqaab adag maro goolhaye Bruno kadib dilka uu geestay.